वेबसाइट डिजाईन र खोजी इन्जिन अनुकूलन कसरी मिलाउने?
प्राय: सामान्यतया, व्यावहारिक रूपले कुनै पनि अनलाइन व्यवसायको लागि नयाँ ढाँचा सुरु गर्दा, प्राय: विचारको शेर साझेदारी वेबसाइट वेबसाइट डिजाइन र खोजी इन्जिन अनुकूलन (एसईओ) मा सेट गरिएको छ।. चलो यो सामना - एक आकर्षक, प्रयोगकर्ता के अनुकूल र व्यावसायिक वेब डिजाइन प्रमुख समस्याहरू हो जब यो सजिलो र सजिलो आगन्तुक पहुँच प्रदान गर्न आउछ. तर के हो भने म भन्न चाहन्छु कि वेबसाइट को डिजाइन मा यिनी सबै कडा कामहरु केवल पछि बर्बाद हुन सक्छ? के हो भने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले कहिलेकाहीँ यस्तो वेबसाइट को पालन गर्दैन जुन Google द्वारा SERP को शीर्ष सूची मा प्रदर्शित छ? यही कारणले गर्दा मैले खोज इन्जिन अनुकूलनको साथ वेबसाइट डिजाइनमा तपाईंको कामका लागि सबै भन्दा राम्रो सहयोगको पूर्वनिर्धारित महत्वबारे छलफल गर्न जाँदैछु। सधैँ हस्त-आन्तरिक हातमा आउँदैछु।.
हरेक वेबसाइट डिजाईन खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेशनले तपाईको सबै भिजुअल सामग्री को खोज एल्गोरिदम अनुसार. मैले तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा राख्नु भएको प्रत्येक तस्वीरको लागि alt ट्यागहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ. यो चीज हो कि अधिकांश खोजी ईन्जिनहरु (साथ नै गुगल आफैले) भिजुअल सामग्री "पढ्न" पढ्न असमर्थ हुन्छन् जब सम्म हरेक चित्रलाई लेख्न आवश्यक विवरणको साथ एम्बेडेड गरिएको छैन।. यसबाहेक, तपाईंको वेबसाइटमा धेरै ठूला तस्बिरहरू साथ बेरिएको छ निश्चित रूपले तपाइँको लोडिङको समग्र गतिमा ढिलो हुनेछ, यसैले SERP मा तपाईंको उच्च स्तरको लागि खराब बनाउनेछ।. यसैले यो तपाईंको भिजुअल सामग्रीलाई तल सार्न महत्त्वपूर्ण छ किनकि प्रमुख एसईओ दिशानिर्देशहरू सम्झँदा छविहरूको नामहरू छनौट गर्दा तपाईंको सम्भावित क्लाइन्टहरूसँग सम्भावित कुञ्जी शब्दहरूसँग इम्बेड गर्ने खोजीमा खोजी क्वेरीमा समावेश छ।.
उत्तरदायी वेबसाइट डिजाइनले खोज इञ्जिन अनुकूलन
आजकल, पोर्टेबल यन्त्रहरू इन्टरनेट ब्राउज गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ।. सम्भावित खरिदहरूको बढ्दो संख्या स्मार्टफोन र ट्याब्लेट मार्फत आवश्यक पर्ने उत्पादन वा सेवाहरू खोज्दै छन्, मोबाइल-अनुकूल वेब डिजाइन अब SERP हरू उच्च स्तरको साथ प्रदान गरिएको छ।. त्यसैले, Google ले ती वेबसाइटहरू पोर्टेबल यन्त्रहरू मार्फत राम्रो ब्राउजिङ अनुभवको लागि अनुकूल कार्यहरूको उचित सेट बिना चल्न थाले. यसैले यो एक उचित विचार हो कि सदैव खोज इन्जिन अनुकूलन को बनाए राखन को लागी तपाईंको उत्तरदायी वेबसाइट डिजाइन एक नै समय मा काम गर्दछ. यो तरिका अभिव्यक्ति, तपाईंको सामग्री पनि आवाज अनुरोधहरूको उत्तरदायी छ भनेर सुनिश्चित गर्न नबिर्सनुहोस्. यसबाहेक, यो विशेषज्ञहरूले सिफारिश गरेका छन् कि केहि राम्रो-अनुकूलित प्रायः सोधिने प्रश्नहरू तपाईंको प्रत्येक वेब पृष्ठमा समावेश गरिएको छ. सम्झनुहोस्, यस्ता सेवाहरू पहिले देखि नै वर्तमान प्रश्न आधारित आवाज खोज अनुरोधहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न जरूरी हुनुपर्दछ.
तपाईंको यूआरएल मा कार्य
यहाँ तपाईंको वेबसाइट डिजाईन र खोज इञ्जिन अनुकूलन को लागी एकदम बढि सुधार को लागी एक अतिरिक्त विकल्प आउँछ।. मेरा मतलब तपाईंले डोमेन नाम छनौट गर्दा केहि सटीक ध्यान तिर्न पर्छ. दिइएका छन् तपाईंलाई पहिले नै एक छ, तपाईलाई वेबसाइटको हरेक पृष्ठको लागि Google-friendly नामहरूको लागी आवेदन गर्न सल्लाह दिइन्छ. प्रत्येक यूआरएल र पृष्ठको शीर्षकले प्रासंगिक वर्णन लक्ष्य लक्षित कीवर्ड र वाक्यांशहरूसँग समृद्धि गर्न पुनः आरक्षित गर्यो. यसो गर्दा, तपाईं आफ्नो वेबसाइट डिजाइन को लागि एक उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता-अनुकूल सुधार प्राप्त गर्नेछ, Google को क्रल बट द्वारा बेहतर अनुक्रमणिका लागि खोज इन्जिन अनुकूलन संग अधिक आकर्षक सेवा गरिरहेका छन् Source .